Ukwenza isayithi lethu libe lula futhi linembile sisebenzisa amakhukhi. Amakhukhi izingcezu ezincane zedatha evumela ukuthi siqhathanise izivakashi ezintsha nezedlule futhi siqonde ukuthi abasebenzisi bangena kanjani esizeni sethu. Sisebenzisa imininingwane eqoqwe ngamakhukhi ukwenza isipiliyoni sokudlulisa amehlo sibe mnandi futhi siphumelele kakhudlwana ngokuzayo.
Amakhukhi awarekhodwa imininingwane yomuntu mayelana nomsebenzisi futhi noma iyiphi imininingwane ekhonjwayo ngeke igcinwe. Uma ufuna ukukhubaza ukusetshenziswa kwamakhukhi, udinga ukwenza ngokwezifiso izilungiselelo zekhompyutha yakho ngokusetha ukususwa kwawo wonke amakhukhi noma ukuvula umlayezo wokuxwayisa lapho amakhukhi egcinwe. Ukuze uqhubeke ngaphandle kokushintsha ukusetshenziswa kwamakhukhi, vele uqhubeke upheqa.
Vakashela MayelanaCookies.org ukuthola eminye imininingwane ngamakhukhi nokuthi awuthinta kanjani umuzwa wakho wokudlulisa amehlo.
Izinhlobo zamakhukhi esizisebenzisayo
Lawo makhukhi abalulekile ukuze akuvumele ukuthi uzungeze isayithi futhi usebenzise ngokugcwele izici zalo, njengokufinyelela ezindaweni ezahlukahlukene ezivikelwe yendawo. Ngaphandle kwalawo makhukhi, izinsizakalo ezithile ezidingekayo, njengokugcwalisa amafomu, azikwazi ukusetshenziswa.
Lawo makhukhi aqoqa imininingwane yokuthi abasebenzisi bayisebenzisa kanjani iwebhusayithi, ngokwesibonelo, okuyinto amakhasi avakashelwa kakhulu, uma uthola imiyalezo yephutha kusuka kumakhasi e-web. Lawo makhukhi awaqoqi imininingwane ekhomba isivakashi. Yonke imininingwane eqoqwe ngamakhukhi ihlanganisiwe ngakho-ke ayaziwa. Zisetshenziswa kuphela ukwenza ngcono ukusebenza kwewebhusayithi. Ngokusebenzisa isiza sethu, umsebenzisi wamukela ukuthi la makhukhi angafakwa kudivayisi yakhe.
Amakhukhi avumela isayithi ukuthi likhumbule izinqumo ezenziwe ngumsebenzisi (ezinjengegama, ulimi noma isifunda) futhi ahlinzeke ngezici ezenzelwe umuntu uqobo. Lawo makhukhi angasetshenziswa futhi ukukhumbula ushintsho olwenziwe ngosayizi wombhalo, amafonti nezinye izingxenye zamakhasi e-web angenziwa ngezifiso. Zingase futhi zisetshenziselwe ukuhlinzeka ngezinsizakalo ozicelile njengokubuka ividiyo noma ukubeka amazwana kubhulogi. Imininingwane eqoqwe yilezi zinhlobo zamakhukhi ingenziwa ingaziwa futhi ungakwazi ukubheka umsebenzi wakho wokuphequlula kwamanye amawebhusayithi. Ngokusebenzisa isayithi lethu, uyavuma ukuthi la makhukhi angafakwa kudivayisi yakho.
Ungawaphatha kanjani amakhukhi kwi-PC yakho
Uma ufisa ukuvumela amakhukhi asayithini yethu, sicela ulandele izinyathelo ezingezansi,
Chofoza ku- "Amathuluzi" phezulu efasiteleni lesiphequluli bese ukhetha Izinketho
Chofoza kuthebhu ethi 'Stuff from geeks', thola isigaba se-'obumfihlo ', bese ukhetha inkinobho "yezilungiselelo zokuqukethwe"
Manje khetha 'Vumela idatha yasendaweni ukuthi isethwe'
I-Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0
Chofoza ku- "Amathuluzi" phezulu efasiteleni lesiphequluli bese ukhetha 'Izinketho ze-Intanethi', bese uchofoza kuthebhu 'Yobumfihlo'
Ukuze usebenzise amakhukhi esipheqululini sakho, qiniseka ukuthi izinga lobumfihlo lisethelwe ku-Medium noma ngaphansi,
Ngokubeka izinga lobumfihlo ngaphezulu kwePhakathi uzokukhubaza ukusetshenziswa kwamakhukhi.
Chofoza ku- "Amathuluzi" phezulu ewindini lesiphequluli bese ukhetha u- "Izinketho"
Bese ukhetha isithonjana sobumfihlo
Chofoza amakhukhi, bese ukhetha 'vumela amasayithi ukusebenzisa amakhukhi'
Chofoza isithonjana se-Cog phezulu ewindini lesiphequluli bese ukhetha inketho ethi "Okuncamelayo"
Chofoza ku-'vikelwa ', khetha inketho ethi' Vimba umuntu wesithathu kanye namakhukhi okukhangisa '
Chofoza ku-'Gcina '
Ungawaphatha kanjani amakhukhi ku-Mac
Uma ufisa ukuvumela amakhukhi asayithini yethu, sicela ulandele izinyathelo ezingezansi:
IMicrosoft Internet Explorer 5.0 ku-OSX
Chofoza ku-'bhula 'phezulu ewindini lesiphequluli bese ukhetha inketho "Okuthandayo"
Skrolela phansi uze ubone "amakhukhi" engxenyeni yefayela lokwamukela
Khetha inketho 'Musa ukubuza'
Chofoza ku-'Safari 'phezulu ewindini lesiphequluli bese ukhetha inketho ethi "Okuncamelayo"
Chofoza ku 'Security' bese 'Wamukela amakhukhi'
Khetha "Kusayithi kuphela"
IMozilla neNetscape ku-OSX
Chofoza ku-'Mozilla 'noma' Netscape 'phezulu ewindini lesiphequluli bese ukhetha inketho ethi "Okuncamelayo"
Skrolela phansi uze ubone amakhukhi ngaphansi kokuthi 'Ubumfihlo nokuphepha'
Khetha u- 'Nika amandla amakhukhi esiza sokuqala'
Chofoza ku-'Menyu 'phezulu ewindini lesiphequluli bese ukhetha "Izilungiselelo"
Bese ukhetha "Okuncamelayo", ukhethe ithebhu 'Okuthuthukile'
Bese ukhetha inketho ethi 'Yamukela amakhukhi'
Ngalesi siza Trovaweb.net izinhlobo ezilandelayo zamakhukhi zingathunyelwa futhi / noma zitholakale ngesiphequluli sakho:
Amakhukhi wezobuchwepheshe avela eceleni kwe-Google Analytics (kuyadingeka ekusebenzeni kahle kwezibalo, alaziwa ngokuphelele)
Amakhukhi wenkampani yangaphandle i-Facebook Inc. (amakhukhi weseshini yama-plugins omphakathi)
Amakhukhi wenkampani yangaphandle iTwitter.com (amakhukhi weseshini yama-plugins ezenhlalo)
Amakhukhi we-Google + wesithathu (amakhukhi weseshini yama-plugins omphakathi)
Amakhukhi wenkampani yangaphandle i-Alexa.com (ngokunokwenzeka futhi amakhukhi wokulandela umkhondo ngezintshisekelo zomuntu siqu futhi axhumeke ngezinjongo zokuhweba, isb. "Izikhangiso ezisuselwa kuntshisakalo* ")
Amakhukhi wenkampani yesithathu yengeza lokhu (ngokunokwenzeka futhi amakhukhi wokulandela umkhondo ngezintshisakalo zomuntu siqu kanye nokuphrinta ngezinjongo zokuthengisa, isb. "Izikhangiso ezisuselwa kuntshisakalo* ")
*Izikhangiso ezisuselwa kuntshisakalo: Amanye amapulatifomu okukhangisa ku-inthanethi asebenzisa amakhukhi ukulandelela izintshisekelo zakho ngenkathi ubhekabheka iwebhu futhi akunikeza imiyalezo yokukhangisa eqondene nawe. Ukuthola imininingwane ngezinketho ezitholakalayo zokuvimbela ukuqoqwa kwemininingwane yakho yizinkampani ezinikezela ngokukhangisa online, sikudlulisela ekuzilawuleni komhlaba jikelele: http://www.aboutads.info/consumers
Ukuphepha kwe-cyber: Leli sayithi lisebenzisa i-TLS / SSL (HTTPS) protocol protry ephephile ngenketho ye-HSTS, lokhu futhi ukuze kuqinisekiswe ukugcinwa kwemfihlo kwemininingwane yakho namakhukhi: ukubethela okusetjenzisiwe kusetshenziswa le protocol empeleni kunikeza izinga eliphezulu kakhulu lokuvikelwa, nokubalwa noma yibaphi abahlaseli abafisa ukuzama ukuphazamisa imininingwane enjalo ngaphandle kwemvume yakho.
Nota: Awekho amakhukhi afakiwe uma isiphequluli sakho silungiselelwe ukwenqaba amakhukhi kusuka kuleli sayithi nasemithonjeni evela eceleni.
Isixwayiso: Imvamisa, noma kunjalo, iziphequluli zivame ukumiswa ukwamukela amakhukhi, ngakho-ke sicela wazise ngezindlela ezithile zokukhubaza ukwamukelwa kanye nokufakwa kwamakhukhi esipheqululini sakho. Kukhona futhi izandiso nama-plugins amaningi asiza ukumisa ukusebenza kwesiphequluli ukuze wenqabe amakhukhi kuwo wonke noma kumasayithi athile.
Funda futhi eyethu Inqubomgomo yobumfihlo
Sicela ushicilele amamojula ngaphakathi i-offcanvas Isikhundla.